‘यहाँ का,लापानीको छ चि,न्ता, तिमी साथी साथी भन्छौ’
Homeमनोरञ्जन‘यहाँ का,लापानीको छ चि,न्ता, तिमी साथी साथी भन्छौ’
काठमाडाैं, ११ जेठ । सरकारले गत बुधबार दिउँसो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्याे । सरकारले सार्वजनिक गरेकाे उक्त नयँ नक्सालाई सबै नेपालीले स्वागत गर्याे, सरकारकाे तारिफ गर्याे, सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
भारतमा कर्म थलाे बनाएकी मनिषा कोइरालाले पनि नेपालकाे नयाँ नक्साकाे समर्थन गरिन् । उनले नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गर्नुभएकाे एक ट्वीटलाई रिट्वीट गर्दै नेपालकाे नयाँ नक्साकाे समर्थन गरेकी थिइन् ।
अभिनेत्री काेइरालाले मन्त्री ज्ञवालीकाे ट्वीटलाई रिट्वीट गर्दै लेखेकी थिइन्, ‘हाम्राे सानाे राष्ट्रकाे गरिमालाई बनाइराख्नु भएकाेमा धन्यवाद । हामी सबै तीन महान राष्ट्रबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक वार्ताकाे आसा गर्छाैँ ।’
उक्त रिट्वीटपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरु मनीषाविरुद्ध खनिए । एबीपीले त ‘भारतकाे खाएर चीनकाे गीत गाउने’ भन्दै आ,राेपसम्म लगायाे । केही भारतीय सामाजिक सञ्जाल प्रयाेगकर्ताले मनीषालाई ब,हिष्कार गर्नुपर्ने भन्दै ह्यासट्याग समेत चलाए ।
मनिषाको बचाउमा नेपाली कलाकारले खुलेरै समर्थ गरिरहेका छन् । कतिपय सेलिब्रेटीले मनिषाको पक्षमा आफ्नो आवाज राख्दै भारतीय संचार माध्यम र सामाजिक प्रयोगकर्ताले उनीसँग मा फी समेत माग्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
सीमा वि,वादबारे बाेल्दा वलिउडकी अभिनेत्रि मनिषाले नेपालमा वाही वाही भइरहेकी बेला यता नपालीकी अभिनेत्रि वर्षा राउत भने ओ,लोचित बन्न पुगेकी छन् । अहिले वर्षालाई नेपाली भूमीको भन्दा पनि आफ्नो भारतीय साथीहरुको बढी चिन्ता भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा धेरैले आ,क्रोश पोखिरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएकाे भिडियाेमा वर्षाले भारतीय साथीहरुसँग आफूले ‘फेस’ गर्न गाह्राे भएकाे बताएकी छन् । उनले नेपाली र भारतीय पत्रकार मिलेर झगडा गराइरहेकाे गम्भीर आ,रोप समेत लगाएकी छन् ।
सार्वजनिक भिडियाेमा उनले भनेकी छन्- ‘देशको माया लाग्छ भन्दैमा ए होइन, यो त हाम्रै हो, तिमीहरुले किन यस्तो गरेको भनेर झ,गडा गर्ने होइन नि, यो त भारत सरकार र नेपाल सरकार मिलेर पो कुरा गर्ने हो त । यहाँ भारतीय र नेपाली पत्रकार मिलेर झ,गडा गराइरहेका छन् । मेरो भारतीय साथीहरुसँग म कसरी फेस गर्ने अनि भारतीय साथीहरुले मसँग कसरी फेस गर्ने भइरहेकाे अवस्था छ ।’
वर्षकाे उक्त अभिव्यक्तिले उनी अहिले आ,लोचित बन्न पुगेकी हुन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा वर्षा र मनिषाबीच तुलनासमेत भइरहेकाे पाइन्छ । शिवराज पाेखरेले ट्वीटरमा लेख्छन्- मनिषा काेइराला, अनुपम खेर जस्काे फ्यान नेपालमा भन्दा भारतमा बढी छन्, तर पनि उहाँहरूले फ्यानकाे मतलब नगरी नेपाललाई सपाेर्ट गर्नुभयाे, वर्षा राउतलाई भारतीयसँग फेस गर्न गाह्राे भयाे रे, कति वटा फिल्मकाे अफर आएकाे थियाे कुन्नी ?
अहिले धेरैले सामाजिक सञ्जाल प्रयाेगकर्ता अभेनेत्री वर्षामाथि खनिएका छन् । कसैले वर्षालाई ‘जलप’वाला कलाकार भएकाे समेत भनेका छन् । कसैले त ‘लिपुलेक दे, वर्षा राउत लैजा’ भन्न समेत भ्याएका छन् ।
एक सामाजिक सञ्जाल प्रयाेकर्ताले कृष्ण हरी बरालकाे शब्द, सुरेश गैरेकाे संगीत र दिपक लिम्बुकाे स्वारमा रहेकाे ‘यहाँ देशकाे छ चिन्ता, तिमी माया माया भन्छाै’ बाेलकाे गीतलाई ‘मोडिफाइ’ गरेर लेखेका छन्-
यहाँ कालापानीको छ चिन्ता
तिमी साथी साथी भन्छौ
साच्चै तिमी भारतीयै हौँ की,
भारतीय जस्तै बन्छौं किन ?
सि,टामोल र भि टामिन सीको चक्की खाँदै कोरोनालाई जित्दै
tamoxifen citrate 10mg [url=https://tamoxifen34.us]nolvadex insomnia[/url] nolvadex and dbol
tamoxifen monitoring nolvadex 50mg nolvadex 40 mg
Global Senario Amoxicillin Sodium Market cialis dosage
revia medication for cutting